Global Voices teny Malagasy » Ny Fomba Hivazivaziana Ao Amerika Miaraka Amin’i Trump · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Febroary 2017 2:56 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika
Hatsikana momba ny foko niaviana, ny maha-izy ny tena ary ny politika no isarihan'i Hari Kondabolu, mpanao hatsikana, ny sain'ny maro. Sary: Kyle Johnson/fanomezan'i Hari Kondabolu
Nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 1 Febroary 2017 ity tantara avy amin'i Sarah Birnbaum  ity. Dika somary nasiana fanovàna kely no navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fiarahana miasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Manana drafitra masiaka ilay mpanao hatsikana, Hari Kondabolu. Mety ho afaka mamarana ny fandraràn'ny filoha Amerikàna Donald Trump ny fivezivezena avy any amin'ireo firenena be Miozolmana izy, amin'ny alàlan'ny fampiasàna fitaovampiadiana miafina: ny tarika zatovolahy Anglisy-Irlandey One Direction.
Ny dingana voalohany ve? Tsy maintsy miverina mitambatra indray ho andianà lehilahy dimy ilay tarika ary mitondra miverina an'i Zayn Malik, izay nandao ny tarika mba handeha amin'ny anaran'ny tenany samirery. “Avy eo dia tsy maintsy manao drafitra hitety izao tontolo izao, tafiditra amin'izany ireo tanàndehibe tsirairay ao Etazonia. Saingy misy olana henjana eto … Miozolmana i Zayn Malik. Ary midika izany fa tsy ho afaka ho any Amerika ny One Direction. Handiso fanantenana sy hahatezitra tovovavy an-tapitrisany izany. … Ireo tovovavy no toa feo politika matanjaka indrindra sy tsy voatrandraka tsara ao amin'io firenena io! Raha tairina, dia hikorontana ambony ambany!”
Tamin'ny Desambra 2015 i Kondabolu no namboraka voalohany ny tetikadiny, fotoana ela talohan'ny nahalàny an'i Trump, saingy taorian'ny niantsoan'ity mpirotsaka hofidiana ho filoha tamin'izany fotoana izany ity “fampiatoana tanteraka sy manontolo ny fidiran'ireo Miozolmana tsy ho any Etazonia.” Ny 27 Janoary 2017, i Trump efa filoha no nanasonia didim-panjakàna  mandràra ireo teratany avy aminà firenena fito be vahoaka Miozolmana — Iràna, Iràka, Libia, Somalia, Sodàna, Siria ary Yemen — tsy hiditra ny firenena mandritry ny 90 andro, hatramin'ny fampiatoana mandritra ny fotoana tsy voafetra ilay fandaharanasa momba ireo Siriana mpitsoaponenana.
Saingy lazain'ilay mpanao hatsikana fa mbola mety ho afaka ampiasaina ihany ilay hevitra. ” Tsapako fa tsy misy zavatra tafahoatra intsony ao anatin'izany. Donald Trump, kintan'ny fandaharana seho mivantana tanaty TV, mpanefoefo, no filohan'i Etazonia. Manana endrika tena iraisan'ny rehetra ny drafitro ankehitriny.”
Hatramin'ny niakaran'ilay mpampiantrano fahiny ny “Celebrity Apprentice” ho amin'ny toeran'ny mpitarika ny tontolo malalaka, noeritreretin'i Kondabolu hatrany ny momba ny toeran'ny vazivazy ao anatin'ny politika, raha hitsiana, dia ny fanjavozavoan'ny resaka maoraly amin'ny famadihana ireo vaovao mahatsiravina ho lasa tsindrom-paingotra.
“Amin-javatra sasany dia toa misy tsy fetezany ihany ao anatin'io, raha raisina ny hamafin'ny karazan-javatra ataontsika anton-dresaka,” hoy izy. “Resahantsika ny fandroahana faobe ary ny fampitahana azy io amin'ireo fanjakàna fasista tany ampiandohany, ary ny sandan'izany amin'ny ain'olombelona sy ny fivakisan'ny ankohonana… ary dia zavatra mavesatra be izany.”
Mametraka ireo mpanao hatsikana ho aminà toerana tsy mampahazo aina izany. “Raha toa ianao [amin'ny maha-mpihaino sy mpanatrika] ka maharaka vaovao, tsy hihomehy ianao satria henjana ny mihaino azy io. Ary raha toa ianao tsy maharaka, ary izaho no ilay nampahafantatra anao, dia betsaka zavatra hotsakotsakoina ao anatiny.”
Miatrika fanamby hafa ireo mpanao hatsikana tato ho ato : Mizarazara be ny mpihaino. Taminà fampisehoana hatsikana iray natao tany Boston tamin'ny Novambra, nihorakorahan'ny olona i Wanda Sykes  taorian'ny nitantaràny teny an-tsehatra vazivazy mamely an'i Donald Trump.
Milaza i Kondabolu fa tsy voahorakoraka izany izy, saingy mazava be ny fizarazaràna ara-politika rehefa injay izy nanao fitetezana tao amin'ny firenena. Ohatra : “Nanao fampisehoana tsy niomanana tao Seattle aho, ary ny segondra nidirako tamin'ny resaka politika, lasa toy ny sary vongana daholo ny iray trano. Tsy asiantsika resaka izay lohahevitra tao … fa dia hoe pitik'afo nandrehitra ny vanja ilay izy e.” Fotoana iray hafa, tsaroan'i Kondabolu, niresaka kely momba ny fanalànjaza sy ny zon'ny vehivavy izy, ary nisy iray tamin'ny mpanatrika niteny taminy hiàla faty any.
“Mba ela ihany izay, fa tsy mbola nandre toy izany aho,” hoy izy mitsiky tsy ravo. “Tena resaka fahiny. Ntaolo be. Toepo tsy mba tsapako teny an-tsehatra nandritry ny taonany izay. Tsy te-hiresaka momba ireny zavatra ireny ny olona ary tsy tiany fotsiny izao hisy olona mizara ny fomba fijeriny amin'ny fomba mitratrevatreva. Hafahafa an.”
Nosainin'i Kondabolu ny hampivadiana ny olona lalaoviny eny an-tsehatra hifanaraka kokoa amin'izay tadiavin'ireo olona sarontsarotiny. “Mazàna aho no nisaina momba izany — fomba hanamboarako ny tenako mba ho takatry ny hafa kokoa? Manana ankohonana aho. Manana zavatra izay azo antoka fa misy ifandraisany amin'ny ankamaroan'ny olona izay tsy resahako amin'ny ankapobeny. Mila miresaka azy ireny aho! Satria ankoatry ny maha-tetikady azy, dia hatsikana tsara io. Hatsikana tsara ho an'ny mpijery ny mahita anao amin'ny maha-olona feno anao. Ary heveriko fa ilaiko ny mampiasa izany bebe kokoa.”
Mpanao hatsikana iray mitondra ny hatsikany ho azo jifaina i Aziz Ansari . Lazain'i Kondabolu fa nijery ny resaka tsy valiana nataon'ì Ansari tao anatin'ny fandaharana “Saturday Night Live” mandeha amin'ny TV izy.
Mamindra am-pitandremana i Ansari ao anatin'ny fahazaran'ny fandaharana SNL. Etsy andaniny, tsindroniny ireo mpomba an'i Trump. Ampitahainy amin'ireo mpankafy ilay amerikàna mpanakanto mpiangaly hip-hop, Chris Brown, izay tia ny mozikan'i Brown saingy tsy manohana kosa ireo “zavatra hafa ataony ivelan'izay” (anatin'ireo olany hafa manoloana ny lalàna , tamin'ny 2009 i Brown dia niaiky fa meloka  tamin'ny herisetra nataony tamin'ny sakaizany tamin'izany fotoana izany, i Rihanna mpihira). Nefa ezahan'i Ansari ihany koa ny hanolo-tànana sy hampitandrina ireo Amerikàna mba ho ‘mailo tsara’. Tsy azontsika antsoina hoe demony ireo olona rehetra nifidy an'i Trump.”
Ambaran'i Kondabolu fa làlana iray azo izorana ny endrika mampihavana ataon'i Ansari. Saingy tsy hety io raha ho azy.
“Heveriko fa tsy natao ho ahy io fika io,” hoy i Kondabolu. “Heveriko fa ho an'i Aziz ao amin'ny ‘Saturday Night Live’ dia anatin'ny kianjany iresahany amin'i Amerika manontolo izy. Somary masiatsiaka kokoa aho. Mirona kokoa mankany amin'ny kiaka fampivondronana aho, azonareo? Tsy te-hitady marimaritra iraisana izany aho.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/10/95453/
 Nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org: https://www.pri.org/stories/2017-02-01/how-crack-joke-trumps-america
 niantsoan'ity : https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-statement-on-preventing-muslim-immigration
 no nanasonia didim-panjakàna: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/27/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states
 Aziz Ansari: https://en.wikipedia.org/wiki/Aziz_Ansari
 resaka tsy valiana nataon'ì Ansari tao anatin'ny fandaharana “Saturday Night Live” : https://www.youtube.com/watch?v=Whde50AacZs
 olany hafa manoloana ny lalàna: https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Brown#Other_legal_issues.2C_rehab_and_jail
 niaiky fa meloka: https://www.theguardian.com/music/2009/jun/23/chris-brown-pleads-guilty